Maxamed Darbad: “Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS) waxaa ka socda xasuuq lamid ah kii Ruwanda” (dhegayso) – Radio Daljir
Maarso 23, 2019 8:56 g 3
Maxamed Xasan Darbad oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka Soomaali Galbeed ayaa wareysi uu siiyey Radio Daljir waxa uu ku sheegay in deegaankaas uu ka socdo xasuuq lamid kii Ruwanda, xasuuqaas oo lagu hayo dadka Soomaalida ayna waddo qoomiyadda Oromada.
Md. Maxamed Xasan Darbad ayaa docda kalena ka hadlay arrimo ay kamid yihiin isbaddalka dhanka hoggaanka ah ee ka dhacay Dowlad Deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan dalka Itoobiya; khilaafka ka dhextaagan xubnaha sarsare ee xisbiga talada haya ee DDS, shir dhawaan ka dhacay Addis Ababa oo dhexmaray beesha Dir iyo Qoomiyadda Oromada iyo arrimo kale.
Maxamed Darbad u warramay Axmed Sh. Maxamed Tallman oo sugan xarunta Daljir ee Bossaso.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 212 Wararka 20291
Tanaasulka ay sameeyeene waxan ugu talagaleen in ONLF aanay shicibka isu racing oo aan dagaalmo waadreed loo samayn ta kale wxuu inta kuwani ku mushquulsanyihiin dhulkooda xuduudaha ka qaaday aye isleeyihiin.Dadka la laayey ee la soo barakiciyey maxuu Cagjar ugu gargaariwaayey haddii and cadawgii ka celin muxuu Amxaarada u siiyey 10,000 bir.
stop pushing fake concipiracies to push somalis and oromos in to war
Marka hore waan helay oon dhegaystey waraysiga mr Darbad. Hasa yeeshee waxa toosin u baahan cinwaanka. Anigu waxan dhihi lahaa “Itoobiya oo maraysa bilawga jidkii Ruwaanda & Kala daadsanaanta ka jirta Maamulka deegaanka Soomaalida”